admin1 – Page 2 – Allpuntlander.com
May 24, 2018 admin1
Dowladaha Pakistan iyo Somalia waxay shalay ku kala saxiixdeen Xafiiska Ra’isul-wasaaraha Pakistan, Shaahid Khaqan Cabaasi Heshiis qiimihiisu dhan yahay 10.5 million oo Dollar oo lagu horumarinayo Nidaamka Waraaqaha Aqoonsiga Somalia (The National ID system) iyo in Taageero Farsamo laga geysto Horumarinta Nidaamka Aqoonsiga Muwaadiniinta Soomaalida. Munaasabadda lagu saxiixay Heshiiskaasi waxaa dhinaca Somalia goobjoog uga ahaa Wasiiru-dowlaha Arrimaha Gudaha, C/llaahi Faarax Wehliye, Madaxa Mashruuca Kaararka Aqoonsiga. Nuur Diiriye Xersi, Danjiraha Somalia u joogta Pakistan, Khadiija Maxamed Al-makhzuumi iyo Saraakiil sarsare oo ka tirsan Safaaradda Somalia ku leedahay dalka Pakistan. Dhinaca kale,…
Yuhuudda waxay ku cadaadinayaan Maamulka Mdaaxweyne Donald Trump sidii uu qeyb ka mid ah dhulka Yuhuudda ugu aqoonsan lahaa Buuraha Golan Heights oo Suurya looga qabsaday Dagaalkii dhacay saannadkii 1967-kii. Wasiirka Sirdoonka ee Yuhuudda, Yisrael Katz oo la hadlay Wakaalladda Wararka REUTERS ayaa sheegay in Ajndahooda sare yahay sidii ay Maraykanka u ayidi lahaayeen inay Buuraha Golan qeyb ka tirsan yihiin Yuhuudda Waxa uu intaasi ku daray inuu qqoddobkaasi muhiim u yahay xoojinta Xiriirka Diplomaasiyadeed ee ay Maraykanka la leeyihiin. Sarkaal ka tirsan Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka oo la hadlay…
Sirdoonka Soomaaliya ayaa badinaya wardoonkooda magaalada Muqdisho ka dib markii ay soo if baxday arrin cusub oo qatar ku ah jiritaanka Dowladnimada,shaqaalo iyo mas’uuliyiinta Dowladda. Kooxda Daacish oo ka dagaalanta Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland ayaa hadda bilowday iney dilal qorsheysan oo nuuc cusub ah ka bilowdo magaalada Muqdisho. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka naxsan Tallaabada cusub ee Muqdisho ku soo kordhay oo qatar ku ah Amniga,waxayna isla dhexmarayaan dil shalay ka dhacay Muqdisho oo ay sheegteen Mas’uuliyadeeda Kooxda Daacish. Ciidanka Dharcadka ee Nabad sugida ayaa maanta Muqdisho ku dilay…
Akhriso:-Puntland Oo Warka Soo Saartay Dagaalkii Maanta Deegaanka Tukaraq
Kadib dagaal saakay ka bilaawday deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa waxaa Warka soo saaray dagaalkaas Maamulka Puntland oo ay ciidamadooda dagaalka kula jiraan kuwa Soomaalilnad. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa lagu sheegay in dagaalkii saakay ay ciidamadooda ku soo qaadeen kuwa Soomaaliland,isla markaana lagu soo gardarooda. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in Puntland iyo Shacabkeeda ay diyaar u yihiin in ay difaacdaan gobolka Sool. Hoos Ka Akhriso Qoraalka laga soo saaray Madaxtooyada Puntland. Shire Garee Wararkeena
Ozil iyo Gündogan oo u sharaxay Madaxweynaha Jarmalka kulankii ay la qaateen Erdogan (Daawo Sawirro)
May 20, 2018 admin1
Ciyaartoyda caanka ah ee Mesut Özil iyo Ilkay Gündogan katirsan xulka Jarmalka sidoo kale ka ciyaara Horyaalka Ingiriiska ayaa kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha dalka Jarmalka Frank-Walter Steinmeie. Labadan ciyaartoy ayaa gudaha Jarmalka kala kulmay dhaleeceyn xoogan oo uga imaaneysay dhinacyo kala duwan kadib markii magaalada London kula kulmeen Madaxweynaha dalka Turkiga Racep Tayib Erdogan. Siyaasiyiin kala duwan oo u dhalatay dalka Jarmalka ayaa ku eedeeyeen labadan ciyaartoy in ay taageero u fidiyeen Madaxweyne Erdogan ka hor inta aysan dalkaasi Turkiga doorashooyinka ka dhicin. Mesut Özil iyo Ilkay Gündogan oo kamid…
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa shaaca ka qaaday in muranka Badda ee Somalia iyo Kenya ay labada dowladood ka gaareen heshiis dhigaya inaan Maxkamad la aadin oo wada hadal wax lagu dhameeyo. Dowlada Soomaaliya ayaan illaa hadda ka jawaabin hadalka ka soo yeeray Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma oo haddii uu run noqdo fadeexad iyo weji gabax ku noqonaya dowlada. Talaabadan ayaa ku soo aadeysa xili Maxkamada caalamiga ah ee Hegue uu hor yaalo kiiska dacwad ay u gudbisay dowladii Madaxweyne Xasan Shiikh oo ku saabsan…
Xukuumada Somalia oo si adag u beenisay hadal kasoo yeeray Dowlada Kenya
Xukuumada Soomaaliya ayaa si adag u beenisay hadal kasoo yeeray Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma , oo sheegtay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kawada hadleyn dacwada badda ee labada wadan u dhaxeeya. Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah ay Dowlada Soomaaliya kala yeelatay dalka Kenya dacwada badda ee u dhaxeysa labada wadan. Waxa uu sheegay Wasiirka in aysan dowlada Soomaaliya kala xaajoon Kenya in dacwada badda ee labada wadan u dhaxeysa in lagu haliyo meel aan aheyn Maxkamada caalamiga…
Siyaasiga Nuur Ismaaciil oo shacabka ka dalbaday in aay muujiiyeen dareenkooda ku aadan heshiishkiii dekada Berbara’
March 8, 2018 March 8, 2018 admin1
Siyaasiga Nuur Ismaaciil Sheekh oo ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed, Shir Jar,Iid ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa canbaareeyay heshiishkii sedax goosadka ahaay ee dhawaan ka dhacay Magaalada Abuu dubai ee Dalka Imaaradka. Siyaasiga ayaa sheegay in lagu xadgudubtay madaxbaaninada iyo midnimada Soomaaliya,waxa uuna xusay in loona baahan yahay in shacabka iyo Madaxda si isku mid ah ugu jawaabaan. Siyaasi Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa shacabka ka dalbaday in aay muujiyaan go,aankooda ku aadan heshiishkii Magaalada Berbera oo aay isku soo bax ka dhigaan Magaalada Muqdisho. Dad baddan oo Soomaaliyeed, ayaa siyaabo kala…
Atoore Sanjay Dutt oo diiday dhaxal ay uga dhimatay haweenay taageere u ah
March 8, 2018 admin1
Xiddiga caanka ah ee aflaamka Bollywood-ka ee dalka Hindiya Sanjay Dutt ayaa waxaa la soo deristay dhacdo lama filaan ah oo dad badanka yaabisay ka din markii lacag iyo hanti kale ay dhaxal ahaan uga tagtay haweenay taageere u ahayd oo geeriyootay. Sanjay Dutt ayaa sheegay ininkastoo uu ka mahadcelinayo ficilka haweenaydan, haddana uusan aqbali karin inuu qaato hantidaas oo cadadeeda la sheegin maadaamaa uusan la kulmin waligiis, isla markaasna uusan aqoon u lahayn. Bishii hore bankiga ayaa atooraha u sheegay in haweenay lagu magacaabo Nishi Harishchandra Tripathi oo 62…
Bilyan’dheerka ugu da’da yar caalamka
Hadalada ka dhanka ah muhaajiriinta ee ka imanaya aqalka Cad ee Mareykankana ayaa waxay nayad jabinaysaa in Mareykanka ay yimaado dadka sameeya barnaamijyada Komputarada. Waxaa sidaasi sheegay Bilyandheerka ugu da’da yar caalamka Irishman John Collison oo 27 jir ah. Shirkadda ay wada asaaseen walaalkiis Patrick, ayaa waxa ay lacago u kala dirtaa kumanaan qof iyada oo adeegsanaysa barta internetka. Collison ayaa sheegay in ganacsigiisii sida aadka ah u kobcayay uu la kulmay caqabad ku aadan in uu soo jiito dadka leh hibada uu alle siiyay . Wareysi gaar ah oo…